एक युवाले राखेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा क्याम्पस पढाउँदै आएकी २४ वर्षकी युवतीले गु माउनु पर्यो ज्या न !!! – News Nepali Dainik
एक युवाले राखेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा क्याम्पस पढाउँदै आएकी २४ वर्षकी युवतीले गु माउनु पर्यो ज्या न !!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ०७, २०७७ समय: ७:५१:५२
एक युवाले राखेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा क्याम्पस पढाउँदै आएकी २४ वर्षकी युवतीले ज्या न गु माउनु परेको छ । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि ति युवतीलाई जि उँदै ज लाईदिएका छन् । यो घटना नेपालको भने होइन । भारतको महाराष्ट्रमा भएको यस्तो घटनाले निकै चर्चा पाएको छ । कलेजमा पढाउँदै आएकी युवतीलाई नागर नामका युवकले मन पराउँथे । महाराष्ट्रको वर्धा जिल्लामा उक्त घटना भएको हो ।
महाराष्ट्रको वर्धाको नंदोरी चोकमा सोमबार बिहान एक विवाहित युवतकले ७ बजे २४ वर्षीया युवतीलाई पे ट्रोल छ र्केर आ गो ल गाइ एको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । विवाहित युवकसंग प्रेम गर्न नचाहेको बताएपछि रि साएका उनले आ गो ल गाइ दिएका थिए । आ गोमा ज लेर ती युवतीको शरीर ३० प्रतिशत ज लेको अवस्थामा स्थानियले उद्दार गरेर अस्पताल पुर्याएका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि ख’तरापुर्ण नै छ ।
ग म्भीर घाइते भएकी युवतीलाई उपचारका लागि सुरुमा स्थानीय अस्पतालमा लगिएको भए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि नागपुरको अरेन्ज सिटी हस्पिटल लगिएको थियो । प्रहरीका अनुसार पीडित युवतीले ७ महिनादेखि एउटा गर्ल कलेजमा पढाउँदै आएकी थिइन् ।
तर युवतीले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि युवाले आ गो लगाएको प्रहरी सामु स्वीकार गरेका छन् । घटनालगत्तै युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पीडित युवतीको नाम गोप्य राखिएको छ । पीडित युवतीले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेर अन्तै विहे गर्न लागेपछि आफुले त्यस्तो कदम उठाएको युवकले प्रहरी सामु बताएका छन् । युवक विवाहित रहेको र पीडित युवतीसँग चिनजान रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
Last Updated on: February 19th, 2021 at 7:51 am